ब्ल्याक कफीको प्रमिस - ३ | काव्यालय
ब्ल्याक कफीको प्रमिस – ३ | SATURDAYकलम | Kavyalaya - काव्यालय
ब्ल्याक कफीको प्रमिस – ३
by आलोक शर्मा उर्फ ओजोन बाबु January 25, 2020
त्यो हिउँदको बेला थियो, पात्ले फुलेर मगमग बासाइरहेको घना जंगल हुँदै हाम्रो पैदल यात्रा उकालो लाग्यो । लगभग लगभग आँफु जत्रै झोला बोकेर रातो चम्किलो रङको टेक्ने लठ्ठीले बाटोमा ट्याक ट्याक आवाज आउने गरि टेक्दै टेक्दै अगाडी छ्यौ तिमी । पछी बसेर तिम्रो उत्साहजनक तिनखुट्टे यात्रा देखेर म नि रमाइलो मानिरहेको छु । अलिक पछी म नि आफूजत्तिकै भारी झोला बोकेर निख्खुर कालो रङको लठ्ठीको साहारामा लम्किँदै छु । “क्यामेरा भारी भयो भनेँ, लेउ म बोक्छु” त भन्यौ । आफूलाई हरियो जंगल नि खिच्नु छ, लेउले सिध्याउन आँटेको ढुङ्गा नि खिच्नु छ, पात्लेमा अरमठ्ठीएको कट्टुसको काँडा नि जुम तान्नु छ । अनि त भारी माथी अर्को भारी छ क्यामेराको । बरू अहिले काँ देखि तिम्लाई नै बोक्नु पर्ने हो के ठेगान हगी ?
अनि हामी अनवरत उक्लिरह्यौँ, माथीबाट तल…….. बादल हेरेको त्यै बेला त हो । बादलको समुन्द्र जस्तो लाग्ने यत्ती धेरै , यत्ती बाक्लै बादल कि झ्वम्म हामफाल्दा बादलमै अड्किएला जस्तो । बादलको क्लोज अप शटले चित्तै नबुझेपछी छेउकै डाँडामा तिम्ले पनि झोला बिसायौ । साइड पकेटबाट थरमस झिक्यौ, भित्रबाट सातुको पोका, मिस्रीको डल्ला, किसमिसका टुक्रा हगी ! थरमसको बिर्कामा तातो पानी राखी, त्यस पानीमा ती पदार्थ घोलिरहँदा सुटुक्क तिम्रो एकाग्र मुहार, नजर हेर्न भ्याएँ अनि सोचेँ (यत्ति सानो काम त यसरी मन लाएर गरिरा’छे, यो केटीले पाल्छे होला मलाई झैँ भइगयो । तिमीले घोलेको एक बिर्काे सातु मिली मिली घुट्क्यायौँ । अनि तिमी डाँडामा उभिएर बादलको समुन्द्र हेर्दै मख्ख परेको लोभलाग्दा तस्वीर जुम गरि गरि लिएँ । तिमीले पत्तै पाइनौ । आँखा छेउको कोठीे मात्रै पनि बडा सानदार देखाइदियो जुमले । धन्य हो, जे पनि सुन्दर देखाईदिने क्यामेरेश्वर, यो सुन्दर देखिएको आँखानेरको कोठीको तर्फबाट कोटी कोटी प्रणाम छ ।
तिम्रो ज्याकेटको गोजिमा भएको भुटेको मकै चपाउँदै सँगसँगै हिँड्यौँ त्यसपछि चाहिँ । घरी घरी हामी जिस्किन्छौँ, अलकति उर्जा देऊ न भन्छ्यौ तिमी, हिउँको सिरेटोले चिस्याएको तिम्रा हिउँभन्दा चिसा गालामा हल्का न्यानो उर्जा म थपिदिन्छु, त्यसपछि तिम्रो हेर्न लायकको मस्काईले म मा पनि उसै उसै उर्जा थपिन्छ, अनि फटाफट लम्किन्छौँ । केहीबेर शून्यता छाउँछ । तर शून्यतामा पनि संगीत भने छ, बाटोमा जुत्ता र लठ्ठीले सृजना गरेको संगीत ! बस्, त्यहि यात्राको धुनमा हामी दुई यात्रारत छौँ ।
पैदल यात्रामा खुट्टाले भुइँसँगको संसर्गमा निकालेको धुन संसारकै मिठो धुन हो । एकछिन यात्रामग्न भएर हिँडेपछि फेरि चल्न आउँछ्यौ तिमी, घरी पछाडीबाट तान्छ्यौ, घरी मेरो पनि लठ्ठी खोसेर टेक्दै ठम्ठम्ती दौडिन्छ्यौ, अनि धेरै बेरपछि म थाकेर डाँडामा पुग्दा थरमसको बिर्काेमा सातु घोलेर तयार बनाएर पर्खिराखेकी तिमी देखेर हुरूक्क हुनेगरी माया लागेर आउँछ । झोला बेपर्वाह फालेर गवाम्ल्याङ्ग अँगालो हाल्दा मनमा शान्ति मिल्छ तुरून्तै । तिमी कत्ती जाती हगी !
फेरि त्यै तिम्रा लोभलाग्दा पोजहरूका क्लोज अप शटपछी गोजीका मकै भटमास चपाउँदै, जिस्किँदै, चल्दै, उर्जा साट्दै हामी हिँडिरहेछौँ अनवरत ।
तिमी “अब त लास्टै गलेँ” भनेर फ्यात्तै भुइँमा बस्दिन्छ्यौ, “अब त आई नै पुग्यो एक्कै स्टेसन मात्र हो” भन्दै भन्दै उर्जा थप्दै हिँडाउँदै गरेपनि, ३र४ पटकदेखि त पत्याउनै छोड्यौ । त्यसबेला त उर्जाले नि काम गरेन, साह्रै अप्ठेरी पो भइगयौ हेर्दा हेर्दै । अनि त तिमी बस्यौ र उठ्दै उठिनौ, अब म एक पाइला नि हिँड्नै सक्दिनँ भनेर जिद्दी नै गर्याै । तिम्रो जिद्दी है फेरि …..नसक्नु नै छ वास्तवमा । अब चाहिँ पक्का एउटा स्टेसन हो पक्का भनेपछी तिमी उठ्यौ, र हिड्यौँ तर एउटा शर्तमा । शर्त थ्यो बाटोभर तिम्रो हात समातेर डोर्याउनु पर्ने मायाले । करले या रिसले होइन । अनि अबको एक स्टेशनमा पनि पुगिएन भनेँ, पहिला झोला पुर्याएर राखेर, आफूलाई पनि बोकेर पुर्याउनु पर्ने । तर हाम्रा पाइला र हामीलाई डोहोर्याउने लठ्ठीले भने बमोजिम कै एकै स्टेम्शनमै गन्तव्य चुमेपछि तिमी त झण्डै उड्यौ, तिमी यत्ति रमाउली, सोचेकै थिइनँ, तिम्रो खुशीले मलाई नि मख्खै बनायो ।
बादलभन्दा माथिको त्यो गन्तव्यको कठ्याङ्ग्रिने चिसोमा हामी भने पग्लिरहेका थियौँ । पहिला पहिला बादलले आकाश छुन्छ कि झैँ लाग्थ्यो, तर हामी त हिमालले आकाश छेड्न आँटेको देखेर छक्क बाट हुँदै हुँदै त तीन छक्कमा पुगेर मख्खको चरम शिखरमा थियौँ । तिम्रो त भुईँमा खुट्टा थिएन । हिउँ पोक्याएर डल्ला पार्दै मलाई हिर्काउनै आ’की हौ त यत्रो हिडेँर ? तिमी एक-एक छिनमा, एक-एक चिजमा रमाएको देखेर म एक हदसम्म त चकितै भइगएँ । तिम्रो यो अद्भुत मनोरञ्जन मुद्रा यसभन्दा अगाडि देखेकै काँ थियेँ त ….?
अचानक मलाई लेक लागेको घोषणा गर्याै तिमीले । हाई हाई गरेछु पटक पटक, रिङ्गटा लाग्यो रे मलाई, हेर्दा हेर्दै निंद्रा पनि लाग्यो भनेँ रे । सातु घोल्नु, जीवनजल घोल्नु, मिस्री फुटाउनु एक श्वासमा सक्यौ सबै आपतकालिन कर्म । र अमृतजल झैँ पिलायौ । अनि म बौरिएँ, अचानक चमक हराएको तिम्रो मुहारको तस्वीर लिएँ । म फ्रेस भएसँगै तिम्रो अनुहारको चमक फर्किएपछि तिम्रो खुट्टा फेरिपनि भुइँमा थिएन ।
टाकुरामा निकै अल्मलियौँ हामी । अलि पर हिमाल चाहिँ कम्मरमुनि बादलको गुन्यूँ लाएर माथि भने नाङ्गै झैँ ठडिएकै थियो । तिमीले हात फैलाएर हिमाललाई अङ्गालेझैँ गरेको आरिसलाग्दो फोटो खिच्ने जिम्मा मेरो हुँदै हो । टकुरामा फैलिएको चौरमा भएका देव-देवीलाई मगमग अगरबत्ती धुवाउँदै गरेको, नमस्कार मुद्रामा परिक्रमा गरेको हरेक तस्विरको ब्याकग्राउण्डमा हिमाल निकाल्नुपर्ने तिम्रो ठाडो आदेश हुबहु पालना गर्न तल्लिन थिएँ म । सेताम्मे हिउँमा लडिबुडी गर्न त बाँकी नै र’छ, त्यसलाई नि झेलेँ । घमाइलो दिन थियो, घाम बास बसेर बिहानै निस्किने हिमाल त्यैँ पर्तिर थियो ।
सेतो तन्ना ओछ्याइए जस्तो हिउँमय भुइँमा चहकिलो छायाँ चलमलाएको प्रस्टै देखिन्थ्यो । यस्तो पावन मौका किन छोड्थ्यौ तिमी ? हामी दुईलाई एक झैँ देखिने छायाँ आकृतिमा डिजाइन गरेर त्यसको फोटो खिचिक्क पार्ने कमालको आइडिया तिम्रै त थियो ! हिउँले चिस्सिएर कुल भएरै हुनुपर्छ, त्यो हिमालभन्दा मास्तिरको डाँडामा हामीले हाम्रा तमाम उतारचढाव बिसाए झैँ लाग्यो ।
“तिमीले भगवानसँग के माग्यौ ?” मैले बेल्न आँ… गर्दा गर्दै, “नभन् नभन् भगवानसंग मागेको कुरा कसैलाइ भन्नु हुँदैन, भन्यो भने पुग्दैन, त्यसै पनि तिम्ले के माग्छौ मलाई था छ” आफै जबाफियौ । कितुं खै…. तिमीलाई के थाह थ्यो, गड नोज ! करिब करिब आफु जत्रै झोलाबाट खासै केही घटेको त पक्कै थिएन, तर तिमी ओरालोमा प्वाँख झैँ हल्का झरिरहेकी थियौ । फेरि पनि म पछाडी नै छु । आउँदा जस्तो सकस छैन ओरालोमा तिमीलाई । म अचम्मित ओ… अचम्मित भइरहेछु । “हे, ह्वाट्स अप …?” “म ओरालोमा हिँड्न सजिलो हुन्छ क्या” । यो वार्तालाप हामी पर परै बाट गर्याैँ, करिब करिब चिच्याएर नै । मलाई चाहिँ ओरालोमा हिँड्न बहुत कठिन हुन्छ । हेर्दा हेर्द‌ तिमी ओझेल पर्याै । म केयरफुल्ली लट्ठीलाई साहारा दिइरहेको छु, कि कतै यो सहारा नभाँचियोस् । र ओर्लिरहेको छु जिन्दगीको यात्रा झैँ, ओरालै ओरालो ।
बल्ल भेटिएकी तिमी गलेर बिसाएझैँ भेटियौ । नगलेकी भए सायद भेट्दिन थिएँ कि ? खैर, तिमी त भेटियौ तर तिमी त एकदमै मायालाग्दी छ्यौ त ! “आँखा टिलपिल छ ! आर यू फाईन …?” ..”नो” । अंगालोमा अड्याएर बिस्तारै ओरालिरहेछु खुट्किलाहरू । तिम्रो खुट्टा जो मर्किएको छ । ‘खुब मच्किँदै उफ्रिराथ्यौ नि, भेट्यौ ? खुच्चिङ !’ भन्न मन लागिरा’थ्यो । तर मायाले ग्वाम्ल्याङ्ग छोपेर ल्यायो । त्यो अंगालोमय यात्राभर तिमी बोलिरह्यौ, म सुनिरहेँ ।
रूखमा अल्झिएका हिँउका त्यान्द्राहरू सिरसिर चलेको बतासले हल्लाएर एउटा-एउटा गर्दै खसालिरहेको छ । हावाले उडाउँदै ल्याएर तिम्रो कपालमा अल्झाउँदा तिमी सेताम्मे फुलेकी बुढीमान्छे, हिउँआमा झैँ देखिरा’की छ्यौ । मैले बुढीमान्छे भन्दा तिमी एकोहोरिएकी देखेर उल्टो म पो खत्रा भावुक हुन पुगेछु । तिमी सेलफोनको सेल्फी मोडबाट आफूलाई नियाल्दै , त्यहाँबाट आँखै नहटाई के तिमी म बुढी हुँदासम्म म सँगै हुन्छौ ?” भन्ने वाक्य उच्चारेर मलाई अवाक बनाइदियौ । सायद म बुढै हुन्न होला, भन्दिऊँ कि झैँ पनि लाग्यो । फेरि, तिमी मसँग भयौ भने त अवश्य , टाईप्समा जबाफित भएँ । अंगालो अंगालैमा ओरालो यात्रा बिस्तारै खत्तम हुँदै गयो । दायाँ-बायाँ फूलै नफुलेका रूखा पाखालाई साक्षी राखेर, मायाले निथ्रुक्क भिज्दै यात्रा निखार्दैँ थियौँ हामी । तिम्रो मर्किएको खुट्टामा तातो तेल खन्याउनु मेरो अर्काे प्रेमिल ड्युटी बाँकी नै थियो ।
यात्राको हरेक पल उत्साहले भरिपुर्ण थियो । कति प्रेमिल थियो भनेर हामी ओकल्न सायदै सक्दैन थियौँ पनि । वास्तवमा यात्रा आफैमा कठिन हुँदै हो, तर हामीले गर्याैँ त्यो पनि सँगसँगै ! हाउ ईन्ट्रेस्टिङ !
बिस्तारै यात्राका पल तस्विरले मात्रै सम्झाउने गरि धुमिल हुँदै गए । पलमा धुलो जम्यो । त्यसपछिका हाम्रा दैनिकीहरू कहिले सलल बगे, कहिले झरना भई माथिबाट खसेर छताछुल्ल भए, कहिले दह भइ जमे । ती फ्रोजन पहरुल कहिले ब्ल्याक कफिको प्यालामा घोलिए, कहिले गुनासाका त्यान्द्रामा अल्झिगए, कहिले अनाम-बेनामका सम्बन्धमा फसिगए, कहिले इगो र एटिट्युडले अल्मल्याउँदा भए, कहिले कुन्ठामा गुम्सिए ।
एवं रितले उतारचढाव हुँदा भए । उतार र चढाव दुवैमा हामी काबु बाहिर कै भयौँ । अजीव-अजीवका व्यवहार प्रदर्शन हुँदा भए, मानौँ ती हाम्रा जन्मजात सोखै हुन् । तिमी रिसले आगो हुँदा सिमकार्ड चपाउँथ्यौ र सेलाएपछि नयाँ खरिद गर्न टेलिकमको अफिसियल काउण्टरमा फेला पर्थ्यौ । यता म छटपटाएर आफैलाई बिर्सिजान्थेँ, किन्तु आई एम फाईनको नारा लाउँदै हिड्थेँ ।
यस्तै यस्तैमा, यस्तो दिन पनि आहाल्थ्यो कि फटाफट २/३/४ वटा सम्म कुल्फी थपी थपी खाँदै गरेको भेटिन्थ्यौँ सँगै । कुनै गर्मिलो, जुनेली साँझ सडक छेउका ठेलामा । खोसाखोस कुल्फी चुसेर कुल-कुल हुन्थ्यौँ हामी दुई । हेर्दा हेर्दै हेर्न लायकको लोभलाग्दो जोडी देखिन्थ्यो बिच बजारमा हगी ! ती कुल पलमा आँखा-आँखा ओ नजर-नजर खुब गफिन्थे । नजरहरू माफिन्थे । आफ्ना-आफ्ना अजीवोगरिब व्यवहारका जिम्मेवारी लिन्थे अनि पुनः प्रेमिल हुन्थे । अनि वाचा, कस्सम । अनि हराउनु, घोलिनु, मिसिनु … यस्तै यस्तै यस्तै ।
परन्तु फेरि बिस्तारै बिस्तारै गर्मिलो दिनसँगै हामी तात्तिएको स्वंयलाई पत्तै नभएपछि बोल्दा बोल्दै आवाजकै करङ भाँचिने गरि भित्तामा बजारिन्थ्यो मोबाइल । यता फोन काँचै चपाउथेँ म । एकदिनको कुरा हो, फोन चपाउने क्रममा आगाडीको दंत लहरबाट एक दाँतले आफ्नो एक अमुल्य चोइटा गुमायो । अर्काे कुलर मिटिङमा मेरो चोइटिएको दाँत सहितको दंत लहर हेरेर, आफ्ना सेता दाँत देखाएर ङिच्चिन्थ्यौ तिमी । हाय ! ती सेता दाँत देखाएर हल्का मुस्कुराएको त्यो मुहार तिम्रो सबभन्दा राम्रो मुहार हो कस्सम !
खै, कतिपटक मेरा कन्सिरी तात्तिए, तिम्रा आँखा कतिपटक रापिला कोइला भए, ठुल्ठुला भए, त्यो त उहुँ गनिनँ । तर पटकपटक रिसै रिसमा तिमी भन्थ्यौ, “एकदिन यति टाढा जान्छु यति टाढा जान्छु कि तिमीले खोज्दा नि भेट्दैना‌ै ।” त्यो साँझ रातो मखमली फूल दुवै मोहोडमा कुँदिएको कालो गाढा रङको मगमा ब्ल्याक कफिसँगै धित मरुन्जेल घोलिएर, केही मिठा वात गरेर, मनको चङ्गा उडाउँदै आ-आफ्ना लट्टाई एक-अर्कालाई थमाएर उडेका हामीलाई एैरे-गैरे जो कोहीले बादलभन्दा माथि पक्कै देखेको हुनुपर्छ । एउटा प्रभातमा, (जसलाई शुभ भन्न लायक छोडिनौ तिमीले) मगमा ब्ल्याक कफिलाई साक्षी राखेर मेरो मायाको लट्टाई यसो बटारेँ, तर तिम्रो मायाको चङ्गा थिएन पर-परसम्म । आखिरमा हामी दुवैले चाहँदै नचाहेको त्यो कालो/मैलो दिन आउन सफल भयो र तिमी गयौ । गइछोड्यौ । त्यसपछि, तिमी बिनाका यी प्रभातका ब्ल्याक कफी यही गाढा कालो मग झैँ अन्धकारमय छन् । शुभ छैनन् प्रभातहरु । तिमीलाई पक्कै लागेको हुनुपर्छ कि निक्कै टाढा गयौ । मैले खोजेको नै त छैन, तर, मेरो ब्ल्याक कफीको प्रमिस, म आफैलाई तिमी भएको महशुस गर्न सक्छु । तिमी कसरी भाग्न सकौली मबाट ? तिमी त धेरै अघि मभित्र कैद भइसकेकी हौ । गाढा कालाे प्यालाकाे ब्ल्याक कफी, बाफ बनेर आफैलाई उडाउने धुनमा छ । कि आउँछ्याै ????? बाफ उडेर कफी नसकिने घाेषणा हामी मिलेर गरम !
आलोक शर्मा उर्फ ओजोन बाबु